eNasha.com - बन्दको बन्दमाथि पनि बन्द ?
बन्दको बन्दमाथि पनि बन्द ?
साइबरसंसारडटकमकी समाचार सम्पादिका प्रीति आचार्य गत साता आफ्नो गृहनगर दमक पुगेर फर्किन् । उनको दमक यात्रा कस्तो रहृयो - टुसुक्क बसेकी मात्र थिइन्, मैले प्रश्न तेर्‍स्याइहालेँ । उनले लामो सास तानिन्, भनिन्- "हिजो आज के भ'को हौ - झिँगाझिँगा जुधे पनि बन्द भइहाल्छ !"
नेपालमा बन्द हाम्रो संस्कृति भएको छ । यो संस्कृति कतिसम्म मौलाएको छ भने जानकारी नै नदिई जसले जतिबेला जहाँ बन्द गरिदिए पनि पुग्छ । अझ तपाइँ एकै जनाले पनि नेपाल बन्द गराउन सक्नु हुन्छ, तर चार पाँच जना भेला भएर हल्ला गर्न सक्नु भयो भने बन्द गर्न कत्ति समय लाग्ने छैन ।
जब म रिपोर्टिङका लागि त्रिपुरेश्वरदेखि कमलपोखरी जाँदै थिएँ, रत्नपार्क नपुग्दै ब्रेक लाग्यो । त्यहाँ पाँच वटा ट्याक्सीहरु तेर्‍स्याइएका थिए । तेर्‍स्याइएकामध्ये एक जनालाई मैले सोधेँ- के को बन्द हो यो ? गाडी किन नचलेका ? तपाइँले गाडी किन तेर्‍स्याउनु भएको ? तर यी प्रश्नको जवाफ स्वयम् बन्दमा लागेका तिनलाई थाहा थिएन । "खोई दाइ म त नयाँ हुँ", उनको संक्षिप्त उत्तर थियो ।
त्यसपछि अलि अगाडि गएँ, जहाँ चाबहिल जाने माइक्रो हिँड्न तयार थियो । टनाटन मान्छे भरिएकाले ठेलमठेलमै जानुपर्ने थियो मैले पनि । चढ्न मात्र लागेको थिएँ, खलाँसीले हातले कोट्यायो । उसतिर हेरेँ । आँखी भौ साँघुरो पार्दै भन्यो- "कार्डको डिस्काउन्ट छैन नि, अैले भन्द्या छु ।" विद्यार्थीहरुले कार्ड डिस्काउन्ट पाउँछन् र उसको आम्दानीमा दुइ रुपियाँले कमी हुने देखेर उसले भनिरहेको थियो ।
पत्रकार न परेँ, अझै कुरा खोतल्नलाई मैले सोधेँ- "पाइरहेको सुविधा किन नपाउने नि ? कि आजदेखि नियम हट्यो ?" एक छिन ऊ केही अन्कनायो- धेरै बोल्नु पर्ने भो भनेर, तर ज्याद्रो रहेछ ऊ । उसले थपिहाल्यो- "गाडी कम छ, यस्तो गाडी कम भएको बेला हामीले पनि कमाउनु पर्‍यो नि !"
यदि मेरो ठाउँमा कुनै विद्यार्थी नेता भए उसको त्यो कन्सिरी तताउने जवाफ सुनेर मुक्काले नाक सुनिने गरी हानिदिन्थ्यो होला ! 'मौका मिलेको बेला कमाउने' महत्वाकांक्षा एउटा खलाँसीदेखि देशका कर्मचारी र नेतासम्म छ ।
पुतलीसडकमा ओर्लिएर म उकालो लागेँ उत्तरतिर । जहाँ अलिअगाडि ज्यादै चर्को भीड थियो- गाडीको होइन, मान्छेको । जहाँ बढीमा २० जना व्यक्तिहरु प्रहरीहरुसँग झुत्ती खेलुँलाझैँ गरिरहेका थिए । मलाई त्यो भीँडमा उनीहरुको झगडाको विषय जान्ने जाँगर मर्‍यो । किनभने अघि प्रीतिले भनेजस्तै, यहाँ झिँगा झिँगा झगडा गरे पनि बन्द हुनसक्छ भन्ने विचार पलायो ।
कुमारी हल हुँदै नक्साल अघि बढ्दै गर्दा कहिल्यै गाडी नदौडिने कुनाकुनाका सडकमा लटरम्म गाडी, मोटरसाइकल, टेम्पो फुलिरहेका थिए । तिनमा कसले कसलाई उछिन्ने दौड मैले देखेँ । त्यो दौड पनि अघि खलाँसीले भनेको 'मौका कमाउने' विम्व झैँ लाग्यो मलाई ।
घ्याच्च ब्रेकः जाँदाजाँदै गाडीहरुको ब्रेक लाग्यो । खुला मञ्च अगाडि रोकिएका गाडीहरु
बाटोमा बिना जानकारी अवरोध गरिएका ट्याक्सीहरु
पुतलीसडकमा भेला भएको बिनाकामको भीड, जसका कारण गाडीहरुलाई निस्कन गाह्रो पारिरहेको थियो ।
बन्दका कारण जाममा फँसेका गाडीहरुको लाम
लुकीलुकी कुनाकानी चलिरहेका ट्याम्पो र मोटरसाइकलहरु
bandhs & protests traffic party city wedding festival bizarre releases real picture culture beauty pageant travel events hi-life celebrity awards story
Tag groups: cinema, city sightings, city updates,